मोदी काकालाइ जापान बाट आयो कडा खुला पत्र, सबै नेपालीहरुले एकपटक पढनैपर्ने ! – Gandaki Chhadke Nepal
November 9, 2019 News DeskLeaveaComment on मोदी काकालाइ जापान बाट आयो कडा खुला पत्र, सबै नेपालीहरुले एकपटक पढनैपर्ने !
डियर मोदी काका ,कालापानि हाम्रो हो अनि लिपु लेकपनि हाम्रो नै हो । हो तिमी हामी भन्दा २२ गुणा ठुला छौ तर याद राख हामी तिमी भन्दा २२ गुना बलिया छौ।
नेपाल मात्र इतिहासको एउटा यस्तो देश हो जसलाइ कसैले शासन गर्न सकेनन। इतिहास साक्षी छ, हामी कसैको गुलाम बन्न चाहेनौ। बरु भोकै मरिन्छ स्वाभिमान बेचिन्न । पानी नखाइ युद्द गरेर जितेका बिरहरुका छोरा नाति हौ हामी ।परि आएको खण्डमा युवा देशका लागि जसरी पनि लढ्न सक्छन कसैको साथ चाहिदैन !
यो संविधानको असन्तुष्टि होइन, स्वाधिनतामाथि गिद्धेदृष्टि र आन्तरिक मामलामा बक्रदृष्टि हो। हामी चुप लागी बस्ने छैनौ । मेरी आमा ले मलाई भन्नु हुन्थ्यो छिमेकिले धेरै दया देखायो भने राम्रो हुदैन बाबु” शत्रु खोज्न टाढा जानुपर्दैन भन्ने कुरा तिमीले पुष्टी गरेका छौ तिमीले ।
याद राख , मुसो सानो छ भन्दैमा बिरालोले बन्द कोठामा थुनेर तड्पाइ मा र्छु भनी सोच्नु गलत हुनेछ। मुसोले ढोका नफोड्ला तर कोठाबाट जरुर निस्कन्छ । डियर मोदी काका ,यत्ति भनेसी त बुझ्छौ होला नि तिम्रो सिमा अतिक्रमण को कुरा ?
मोदी काका , तिमिले नेपालको बिषयमा सम्बोधन नगरेकै राम्रो ।बरु आफ्नै भारतमा भोकमरिले पिल्सिएका लाई र गरीबिले थिचिएका लाई जाउ गएर सेवा गर ।पुगेन भने बरू म मेरो हिमाल बाट स्याऊ टिपेर पठाई दिउँला , पहाड बाट कोदो र तराई बाट धान पठाई दिउला ।त्यति धेरै कमजोर पनि नसोच नेपाली लाई ।
तिमि संग त सिमाना मात्र जोडीएको हो नेपालको तर बिश्ब सँग त मन र आत्मा दुबै जोडिएको छ । हामी नेपाली मित्र बन्न चाहनेका लागि संसारकै सबैभन्दा उत्तम मित्र र शत्रु बन्नेका लागि संसारकै सबैभन्दा खतरनाक शत्रु जाति हौं । उही एक नेपाली राष्ट्र प्रेमी प्रकाश रिजाल
अब नेपाल-भारतको सीमामा काँ’डे तार लगाउनुपर्छ’ – सहमत हुनुहुन्छ भने एक शेयर गर्नुहोस।